Ahoana ny fanamorana ny fifindrana avy amin'ny MS Office mankany LibreOffice | Avy amin'ny Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, soso-kevitra
Ny efitrano fiasan'ny birao dia fitaovana lehibe amin'ny fizotry ny fifindra-monina mankany amin'ny rafitra miasa hafa, tsy amin'ny toeram-piasana ihany fa ho an'ny mpampiasa trano ihany koa. Tsy zava-miafina izany, ny fanontaniana mahazatra indrindra ren'ny olona rehefa manome sosokevitra amin'ny olona iray hafa ny mety hisian'ny fifindrana mankany amin'ny GNU / Linux dia ny: "Hahafahako manokatra rakitra MS Office toa izany ve?" Noho io antony io indrindra dia manintona ny saiko hatrany ny zava-dehibe kely apetrakay amin'ny efitrano misy ny birao ao amin'ny GNU / Linux. Raha lazaina amin'ny teny hafa, mino aho fa ny GNU / Linux dia tena hampiasaina be sy handresy ny tsenan'ny solosaina birao indray mandeha ary ho an'ny rehetra, tsy mila mpampanonta horonan-tsary mandroso kokoa na mpanonta sary izay tena vaovao. an'ny Photoshop, na dia tsy filalaovana kilalao toa Steam aza. Ny hany ilaina dia ny fanamorana ny tetezamita.
Ny fahazoana ny orinasa GNU / Linux apetraka amin'ny solosaina maro dia azo antoka fa dingana iray amin'ny lalana tokony haleha, saingy inona no fanampiana raha toa ka tsy mamela anao hanokatra ireo rakitra iasan'ny olona, ​​ohatra, ny birao fiasa? Noho io antony io, iray amin'ireo zavatra amporisihiko amin'ireo olona te hanandrana ny GNU / Linux dia ny manomboka manandrana rindranasa rindrambaiko maimaimpoana izay miasa ao amin'ny Windows ihany koa. Tamin'izany no nilamina kokoa ny tetezamita. Ka, ohatra, apetrako ny LibreOffice, VLC, GIMP ary Firefox, ankoatry ny hafa, mba ho zatra ny interface sy ny asa ankapobeny.
Ny tranga manokana momba ny LibreOffice dia, araka ny efa noresahiko, tena zava-dehibe ary tsy hoe tsy misy olana. Ity mini-guide ity dia mikendry ny hanampy ireo saika hanandrana ity efitrano fiasan'ny birao ity hahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra tsara, ary fantatr'izy ireo ny tombony sy ny fatiantoka amin'ny fampiasana an'ity programa ity.
1 Fa maninona no mivadika LibreOffice?
2 Inona ny olana mety hatrehiko raha manapa-kevitra ny hifindra monina aho?
2.1 Tsy lafatra ny tohana rakitra
2.2 Macro tsy mandeha
2.3 Tsy afaka manitsy antontan-taratasy miaraka
2.4 Tsy fahampian'ny asa na lesoka (bibikely)
3 Fanontaniana hafa
3.1 Ianaro ny fitoviana
3.2 Fifanarahana fifindra-monina mankany LibreOffice
3.3 Mametraka Microsoft Fonts
Fa maninona no mivadika LibreOffice?
Afaka. Tsy toy ny MS Office, tsy mila mandoa vola vola be afaka mampiasa azy. Na dia mety ho antony maharesy lahatra ho an'ny mpampiasa manokana aza ity tenany ity, dia misy fiatraikany lehibe kokoa amin'ny orinasa kely sy salantsalany, izay mazàna mampiasa rindrambaiko birao iray isaky ny solosaina fandraharahana. Betsaka ny olona, ​​eny fa na ny orinasa sasany na ny fanjakana aza (sic) tenany ihany, dia aleony misoroka an'io olana io amin'ny alàlan'ny fampiasana kopia piraty an'ny MS Office, miaraka amin'ny risika fiarovana aterak'izany. LibreOffice kosa dia safidy hafa azo antoka sy azo antoka.
Rindrambaiko maimaim-poana izany. Toy ny rindrambaiko maimaimpoana rehetra, ny LibreOffice dia mahazo fanatsarana mitohy, izay misy fiatraikany mivantana amin'ny filaminana sy ny fitoniana amin'ny programa. Ankoatr'izay, LibreOffice dia manana iray amin'ireo vondrom-piarahamonina mavitrika indrindra, izay miasa maharitra amin'ny fampidirana ireo fiasa vaovao sy ny fanitsiana ireo lesoka.
Mampiasà endrika maimai-poana: Tsy toy ny DOC, WPD, XLS na RTF, izay endrika mihidy izay ny mpamorona azy irery no tena mahalala tsara, ny LibreOffice dia mampiasa ny ODF endrika maimaimpoana, izay nanjary ilay fenitra iraisam-pirenena ISO 26300: 2006. Ny zava-misy amin'ny fampiasana endrika misokatra sy mahazatra dia manalavitra ny fahaverezan'ny antontan-taratasinao ary mamela azy hisokatra amin'ny ho avy.
Sehatra marobe izany: Misy kinova LibreOffice ho an'ny Windows, Mac ary Linux. Manamora ny tetezamita izany, indrindra raha tsy mampiasa rafitra miasa mitovy ao an-trano sy any am-piasana ohatra.
Tsy tianao ny interface MS misy ribony MS Office. Mpampiasa maro no aleony miala amin'ny MS Office satria tsy afaka nifanaraka tamin'ny fantsom-pitaovana. LibreOffice kosa manana interface visual "mahazatra" izay manamora ny fifindrana ho an'ireo zatra ny interface MS Office taloha.
Inona ny olana mety hatrehiko raha manapa-kevitra ny hifindra monina aho?
Efa hitantsika ny antony andehanana. Na izany aza, toy ny fizotry ny fifindra-monina dia mety hipoitra ny olana. Andao jerena ny sasany amin'ny mahazatra:
Tsy lafatra ny tohana rakitra
Ny LibreOffice sy ny MS Office dia tsy mampiasa format mitovy amin'ny fisie azy ireo. Araka ny efa hitantsika dia mampiasa ODF ny LibreOffice. Ho azy ireo, ny kinova MS Office taloha dia mampiasa endrika mikatona (DOC, XLS, sns.) Izay i Microsoft irery no mahalala lalina. Hatramin'ny 2007, MS Office dia mampiasa OpenXML amin'ny alàlan'ny default, fantatra ihany koa amin'ny hoe OOXML (DOCX, XLSX, sns.). Tsy toy ny endrika teo aloha, io dia azo raisina ho endrika misokatra (toy ny ODF) ary nahavita lasa fenitra iraisam-pirenena ISO / IEC 29500.
Na dia ny kinova farany an'ny LibreOffice sy MS Office aza dia mifanentana amin'ireo endrika rehetra ireo -ary ny maro hafa- ny marina dia tsy lavorary izy ireo, izay matetika mahatonga ny fisie tsy hitovy amin'ny programa iray sy iray hafa. Mazava ho azy fa matotra kokoa io raha ny amin'ny LibreOffice, satria tsy dia be mpampiasa noho ny MS Office. Noho io antony io dia ireo mpampiasa LibreOffice no tsy maintsy mampifanaraka ireo endrika mavesatra, raha tsy azo ihodivirana izany, mazava ho azy.
Ahoana ny fanalefahana ity olana ity?
Eny, ny zava-dehibe eto dia ny mamaritra raha tokony ahitsy aorian'izay ireo rakitra resahina.
Raha tsy ilaina ny fanovana, dia tena tsotra ny vahaolana. Ny tsara indrindra dia ny manondrana ny antontan-taratasy amin'ny PDF ary mizara ity fisie ity fa tsy ilay voalohany. Marina izany na ho an'ny rakitra MS Office (DOC, DOCX, XLS, XLSX, sns.) Ary ho an'ny rakitra LibreOffice (ODF), satria na dia marina aza fa ny fanampiana izay ampidirin'ny LibreOffice ho an'ny antontan-taratasy MS Office dia tsy tonga lafatra, ny kinova vaovao ihany. an'ny MS Office dia misy ny fanohanan'ny ODF, ary ny sasany misy fanohanana ratsy sy voafetra ihany. Amin'ny fizarana ny fisie amin'ny endrika PDF, etsy ankilany, ho azonay antoka fa ireo izay manokatra fisie dia afaka mahita azy tahaka ny namolavolana azy. Tsara ny manamarika fa ny LibreOffice dia ahitana ny mety hanovana antontan-taratasy ho PDF fa tsy mila mametraka extension na fonosana fanampiny. Mila mankany fotsiny ianao File> Manondrana ho PDF. Ireo mpampiasa izay maniry hanao izany dia afaka manamboatra andiana safidy hanamboarana an'io fanondranana io ihany, izay raha ny tokony ho izy dia iray amin'ireo mandroso indrindra hitako tamin'ity karazana birao ity.
Raha ilaina ny manitsy ny rakitra hizarana dia tsy misy vahaolana tonga lafatra na dia misy aza ny tolo-kevitra sasany tokony horaisina. Ny voalohany sy lehibe indrindra dia ny fitehirizana ireo rakitra ireo amin'ny endrika MS Office 97/2000 / XP / 2003. Nandritra ny zavatra niainako hatry ny ela tamin'ny fampiasana LibreOffice, ary alohan'ny OpenOffice dia afaka miteny soa aman-tsara aho fa ny rakitra endrika DOC dia (saika) tohana tsara kokoa noho ny fisie DOCX. Toy izany koa no azo lazaina amin'ny rakitra XLS sy rakitra XLSX, sns. Etsy ankilany, na dia aleony ampiasaina matetika aza ny endrika maimaim-poana, dia misy fanohanana rakitra ODF tsy dia misy fotony ao amin'ny MS Office. Ho famaranana, mampalahelo fa ny vahaolana tsara indrindra dia ny famonjena ny fisie amin'ny endrika MS Office taloha. Ity dia, raha ny fahitako azy, fifanoheran-kevitra goavambe satria ny LibreOffice dia misy fanohanana tsara kokoa ho an'ny format MS Office an'ny tompona fa tsy ny fisokafan'ny endrika OOXML. Fa hey, izany no zava-misy mampalahelo.
Etsy ankilany, satria ny LibreOffice mamonjy rakitra amin'ny endrika ODF amin'ny alàlan'ny default, isaky ny mitahiry rakitra miaraka amina endrika hafa isika dia mahazo famantarana mampitandrina antsika amin'ny mety ho olana mifanentana. Raha sanatria manelingelina ity ary te-hihary mandrakariva amin'ny endrika MS Office 97/2000 / XP / 2003 ianao, dia azo atao ny manova izany fihetsika izany amin'ny alàlan'ny Fitaovana> Safidy ary avy eo Load / Save> General. Eo dia mila esory ny boaty Mampandre ahy rehefa tsy mitahiry endrika ODF aho ary ao Mitsitsia foana toy ny mifidy MS Office 97/2000 / XP / 2003, araka ny hita eo amin'ny pikantsary etsy ambany.
Macro tsy mandeha
LibreOffice dia misy fanohanana an'i Macros, saingy ireo dia tehirizina amin'ny fampiasana fiteny hafa noho ny MS Office. LibreOffice dia mampiasa fiteny antsoina hoe LO-Basic, raha MS Office kosa dia mampiasa kinova Visual Basic natokana ho an'ny rindranasa, fantatra amin'ny anarana hoe VBA. Na dia mitovy be aza ny fiteny roa dia samy manana ny tsy itovizany izy ireo ary tsy mifanaraka. Toy ny hoe tsy ampy izany, LibreOffice dia ahitana fanohanana tena lehibe ho an'ny VBA, ary ny MS Office dia tsy misy fanohanana ny LO-Basic. Midika izany fa ny makrô izay voasoratra ao amin'ny MS Office dia mahalana no mihazakazaka tsara ao LibreOffice, ary ny mifamadika amin'izany. Ary farany, ny LO-Basic antontan-taratasy tena mahantra izy io, na amin'ny anglisy aza. Ireo liana amin'ny fifehezana LO-Basic, dia afaka mijery ity taloha torolàlana ho an'ny programmer.
Manoloana an'io olana io dia tsy misy ny fandosirana, marina. Ny sisa sisa dia ny mahafoy ny fampiasana makrô na mandika ny makrô amin'ny tanana, izay mety ho asa somary mora amin'ny macros tsotra indrindra na odyssey tena izy raha misy ny makrô manahirana kokoa.
Tsy afaka manitsy antontan-taratasy miaraka
Na dia taona maro lasa izay aza dia nambara fa io fampiasa io novolavolaina, ary na ny horonan-tsary miaraka amina prototype miasa aza dia natsofoka, noho ny antony tsy nandroso mihitsy ilay zavatra. Ergo, LibreOffice dia mbola tsy manana fahaizana manitsy ny antontan-taratasy.
Amin'izao fotoana izao, ny safidy tsara indrindra ho an'ny mpampiasa GNU / Linux dia ny fampiasana Google Docs, Zoho, na serivisy rahona hafa toa azy. Anisan'ireo safidy maimaim-poana izay manasongadina OnlyOffice y Etherpad, izay mamela ny antontan-taratasy miasa miaraka ihany koa.
Tsy fahampian'ny asa na lesoka (bibikely)
LibreOffice sy MS Office dia tsy mitondra fampiasa mitovy. Midika izany fa zavatra sasany azo atao amin'ny LibreOffice dia tsy azo atao ao amin'ny MS Office ary ny mifamadika amin'izany. Angamba, asa maro hafa no tsy hita ao LibreOffice noho ny ao amin'ny MS Office, indrindra fa ny LibreOffice Impress sy Base, ny mitovy amin'ny MS Power Point sy Access.
Ny fahafantarana ireo fetra ireo mialoha dia zava-dehibe rehefa mifindra any LibreOffice. Raha te hahita lisitra fampitahana feno momba ny fiasan'ny LibreOffice sy ny Office MS dia manolotra hevitra aho hamaky ny Wiki ny Document Foundation. Marihina fa ny sasany amin'ireto olana ireto dia tsy dia matotra araka ny fahitana azy. Ny zava-misy fa ny LibreOffice Base dia tsy feno toy ny MS Access dia tsy maninona na dia kely aza ny fiheverana fa ny Access mihitsy dia heverina ho rafitra tahiry daty efa lany daty, be lavitra noho ny an'ny maoderina hafa. Mikasika ireo lesoka mety hananan'ny programa, satria rindrambaiko maimaim-poana izany dia atoro anao mitory ny bibikely ka afaka ahitsy ny fiarahamonina.
Ianaro ny fitoviana
Zava-dehibe ny mianatra ny anaran'ny programa izay manolo ny tsirairay amin'ireo fitaovana MS Office, ary koa ireo fanitarana samihafa ampiasain'ny default amin'ny tsirairay amin'izy ireo.
Teny (.doc, .docx) Mpanoratra (.odt)
Fidirana (.mdb, .accdb) Base (.odb)
Visio (.vsd, .vsdx) Sary (.odg)
Fifanarahana fifindra-monina mankany LibreOffice
Ny Document Foundation, ny fototra ao ambadiky ny fampandrosoana ny LibreOffice, dia nanomana a fifindra-monina fifindra-monina amin'ity efitrano birao ity izay misy ny lisitry ny fepetra horaisina rehefa manomboka ny fizotry ny fifindra-monina amin'ny fikambanana rehetra. Ampirisihina hamaky ity antontan-taratasy ity.
Mametraka Microsoft Fonts
Ny iray amin'ireo antony tsy itovizan'ny antontan-taratasy sasany amin'ny Windows sy GNU / Linux dia satria ny endritsoratra ampiasaina amin'ny Windows dia tsy apetrakao ao anaty GNU / Linux. Na dia misy aza ny safidy hafa maimaimpoana miaraka amin'ny GNU / Linux ary ny sasany amin'izy ireo, na dia ambony noho ny lafiny teknika aza dia tsy mitovy.
Tany amin'ny faramparan'ny taona 1996 dia namoaka "fonosana fonosana TrueType mitsikera web" i Microsoft. Ireo endritsoratra ireo dia nanana fahazoan-dàlana mamela heloka tokoa, ka afaka mametraka azy ireo ny tsirairay. Tamin'ny fotoana nanirian'i Microsoft ny endrik'izy ireo ho lasa endriny mahazatra eran'izao tontolo izao, ka navoakany tamin'ireo izay te hampiasa azy ireo. Ity fonosana ity dia misy an'Andale Mono, Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, Impacto, Times New Roman, Trebuchet, Verdana ary endritsoratra Webdings. Aza adino fa ny Times New Roman no endri-tsoratra tsy misy fangarony ho an'ny antontan-taratasy Office hatramin'ny 2007.
Fametrahana ao Ubuntu ary ny derivatives:
Ny fonosan'ny Microsoft Clear Type dia azo apetraka ihany koa. Ireto loharanom-baovao ireto dia: Constantia, Corbel, Calibri, Cambria, Candara ary Consolas. Calibri no lasa endritsoratra tsy misy tomika ao amin'ny Microsoft Word nanomboka tamin'ny kinova 2007 mandroso. Mampalahelo fa tsy namoaka an'ireny endritsoratra ireny ho an'ny besinimaro i Microsoft, toy ny tamin'ny endriny True Type. Na izany aza, nampidiriny ireo endri-tsoratra ireo ho ampahany amin'ny PowerPoint 2007 Viewer, izay azo alaina maimaim-poana. Manararaotra an'io toe-javatra io dia azo atao ny mampiasa script izay hampidina ny PowerPoint Viewer an'i Microsoft, hamoaka ireo fonosana Clear Type, ary hametraka azy ireo amin'ny rafitra GNU / Linux anao.
Aza adino ny manome alalana fampiharana amin'ny fisie ary ampandehano izany:
Raha hampiasa ireto endritsoratra default ao amin'ny LibreOffice ireto dia mandehana fotsiny Fitaovana> Fikirana ary avy eo Mpanoratra LibreOffice> endritsoratra fototra, araka ny hita eo amin'ny pikantsary etsy ambany.
Raha raisina ny traikefanao amin'ny maha mpampiasa GNU / Linux anao, inona koa ny fanontaniana apetrakao amin'ireo mpampiasa izay mieritreritra ny hifindra any LibreOffice?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fanamorana ny fifandimbiasana avy amin'ny MS Office mankany LibreOffice
eneas_e dia hoy izy:
Dimy taona teo ho eo izay no lasa nifindra tany LibreOffice aho ary maro no voan'izany fiovana izany. Ny tetika ataoko dia ny tsy fanenjehana olona.
Rehefa mandefa antontan-taratasy amiko ireo izay miasa miaraka amina fikandrana am-baravarankely, dia averiko amin'ny endriny roa, ny dokotera ary ny odf. Ataoko tsikaritr'izy ireo, ohatra, ny fahaizan'izy ireo miasa rehefa avy eo am-pelatanako. Teraka ny resaka ary avy eo lazaiko azy ireo ny suite, lazaiko izy ireo hametraka izany amin'ny masinin'izy ireo amin'ny windows na mac, mba hanandramana azy, hananana ireo programa roa ary hampitahanao ny hafainganan'ny asa amin'ny iray sy ny hafa.
Nanana tranga mpiray tsikombakomba na mpanjifa nandao ny suite aho ary volana vitsivitsy taty aoriana dia manana ihany koa ny OS tompony satria hitan'izy ireo fa mahomby kokoa, haingana, mahazo aina ny Libre.
Oh, ary tsy sanatria mihitsy aho mandratra anao amin'ny filozofika filofika momba ny antony mahatonga ny maro amintsika hampiasa rindrambaiko maimaimpoana. Mila famokarana mahomby izy ireo ary maimaim-poana koa! Raha ny zavatra niainako, ny fanararaotana sy ny fandefasana amin'ny windows sy ny fanasoavana ny linux GNU avy amin'ny lafiny hafa fa tsy ny subtract mamokatra manokana ary tsy manampy.
Valio i eneas_e
Misaotra nizara ny zavatra niainanao.
Casius dia hoy izy:
Raha ny zavatra niainako dia tsara kokoa hatrany amin'ny LibreOffice ny mitahiry ireo fisie amin'ny endrika misokatra ary mitahiry azy ireo amin'ny endrika MS Office fotsiny rehefa tianao ny handefa azy ireo any amin'ny olona iray mampiasa ilay suite voalaza ao amin'ilay birao.
Raha toa ka voatahiry am-boalohany miaraka amina endrika mihidy izy io, dia mety miovaova ny rakitra na manome olana amin'ny fomba / endrika isaky ny manokatra azy isika ary, na eo aza ny fanitsiana ireo lesoka, miseho indray izy ireo rehefa nosokafana indray ny rakitra ao amin'ny LibreOffice.
Mamaly an'i Casius
Mizara tanteraka ny hevitrao aho.
Lahatsoratra tena tsara ..
Manana olana amin'ny script an'ny endritsoratra aho:
bash: ./vistafonts-installer: / bin / sh ^ M: mpandika teny ratsy: tsy misy fisie na lahatahiry
fa ao anaty fampirimana ilay rakitra ~ /
Tokony hametraka alalana famonoana amin'ny chmod + x vistafonts-installer ianao.
Raha apetrako amin'ny fisie ny fahazoan-dàlana famonoana .. Na izany na tsy izany, hataoko amin'ny tanana toy ny | emir |
Misaotra anao ihany!
jvk85321 dia hoy izy:
Namboarina avy teo am-baravarankely izany, tsy maintsy esorinao ireo tarehin-tsoratra miafina izay midika fahatapahan-tsipika apetraky ny windows. Misy programa kely manao an'io dos2unix io. Mametraka azy ireo ianao "apt-get install dos2unix" ary amin'izany dia hesorinao ny ^ M izay miseho aminao.
Valio ny jvk85321
Tsy hitako ny rakitra izay mila ovako mba hampandehanana ny script. Iza ny anarana ary ao anaty fampirimana inona no ahitako azy tsara?
jksks dia hoy izy:
ny tena mpisolo toerana dia antsoina hoe biraon'ny wps, io no clone an'ny biraon'ny microsoft, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia zatra ny interface ny birao microsoft noho io antony io ihany no tsara kokoa wps
Mamaly an'i jsksks
Keiller dia hoy izy:
WPS amin'ny maha-safidy Freeware dia tsara. Amin'ny maha-safidy Libre azy dia ny LibreOffice na OpenOffice no tsara indrindra.
Valiny tamin'i Keiller
Lahatsoratra tsara nefa tena tsara!
| emir | dia hoy izy:
lahatsoratra tena tsara feno torohevitra mahaliana
olana amin'ny fantsona amin'ny script toa an'i Jose, tsy haiko raha tsy mifandray ny OS-ko fa voavaha
Novakiako izy ary nahazo ny lalana hitondrana ireo rakitra fonosana ary hametrahana azy ireo amin'ny alàlan'ny terminal.
Valiny | emir |
franksanabria dia hoy izy:
Amin'ny fotoana iaraha-miasa, miaraka amin'i Calc dia mandeha tsara izy io, hatreto dia tsy nahomby tamiko.
Valio amin'i franksanabria
Marina izany. Hadinoko ny nilaza fa miaraka amin'i Calc dia azonao atao… Tsy azoko hoe inona no andrasan'izy ireo hahafahan'izy ireo manoratra ao amin'ny Mpanoratra.
Vao tamin'ity herinandro ity aho dia nanapa-kevitra ny hijanona tsy hampiasa ny suite an'ny Microsoft, izay mazava ho azy fa rindrambaiko lehibe, hivadika amin'ireo kinova maimaimpoana, izay nampiasaiko nandritra ny taona maro tao an-trano tamin'ny Linux sy Windows. Izany hoe, Thunderbird fa tsy Outlook sy LibreOffice fa tsy Office.
Imbetsaka aho no nitazona ny Office hifanaraka amin'ireo antontan-taratasin'ireo mpiara-miasa sy mpanjifa hafa, saingy tsapako fa kely dia kely ny fifanakalozana antontan-taratasy amin'izy ireo, ary ny fampiasana lehibe indrindra dia ny ahy, ka tsy hitako izay antony hampiasana rindrambaiko tompona izay toy ny amin'ny tranga maro hafa dia manana fiandohana tsy mety izy io.
Mikasika ny fomba fanaovana fampielezan-kevitra ... am-pahatoniana, raha mangataka antontan-taratasy amiko ianao dia homeko anao ny safidin'ny ODF sy ny orinasa, endrika PDF na Microsoft novain'ny LibreOffice. Tsy ny fanaovana heck, fa nanontany tena foana aho hoe maninona no SME maro no mampiasa rindrambaiko manana ny ankabeazany, ary misy zavatra tokony homena.
angelrell369 dia hoy izy:
Ny marina dia, ambony lavitra noho i Calc ny excel, nanandrana niara-niasa tamin'ity farany aho fa rehefa miasa miaraka amina firaketana maherin'ny 100.000 dia mihantona, miaraka amin'ny excel feno ary ny macros azy dia tena mora ampiasaina, ho hitanao ao ny suite ankoatry ny fisehoan'ny, mila manatsara betsaka i Calc mba hahatonga azy io ho safidy matanjaka amin'ny birao, dia ny hevitro manetriketrika.
Mamaly an'i angelrell369
Mitovy ny eritreritro. Na izany na tsy izany, tsy maintsy lazaina ihany koa fa na dia mety tsy mifanaraka amin'ny fenitry ny MS Excel aza izany, ny marina dia 90% ny mpampiasa no tsy mampiasa mihoatra ny ampahany kely amin'ny zavatra atolotry ny programa ... ary LibreOffice dia afaka manao ireo "fototra" zavatra somary tsara.
Voavaha ity olana ity amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fizarana fahatsiarovana LibreOffice, tsy maintsy ampitomboinao ny fampiasana ny ondrilahy natokana.
Gab dia hoy izy:
Hevitra aorian'ny "fijaliana" amin'ny fampiharana ny ApacheOpenoffice eo amin'ny toeram-piasako.
- Ny fanokafana antontan-taratasy dia maharitra 5 heny noho ny fanombohana azy amin'ny MSOffice. Vokatr'izany:
Raha handany tolakandro ianao amin'ny fanoratana an'io lahatsoratra io, dia toa tsy zava-dehibe aminao izany, fa izaho sy ireo mpiara-miasa amiko dia mandany 40% amin'ny fotoana hanokafana sy fanidiana ireo rakitra mba hijerena ny toetoetran'ny rakitra tsirairay alohan'ny hanoratanay ny vatana. ny lahatsoratra manavao izany rakitra izany.
Matetika isika dia manana olona ivelany hanazava ny fivoaran'ny rakitra hatramin'ny voalohany, ary amin'ny tranga maro dia ahitana ny fanomezana vaovao ratsy be azy ireo, ka tsy afaka manome azy ireo tantara mirindra sy mirindra, dia mandany fotoana mangina be izao isika eo amin'ny vaovao ratsy sy ny vaovao ratsy…
Manana tompon'andraikitra manelingelina ny "fotoanany sarobidy" izy ireo ary mihevitra ny hiala amin'ny biraony feno fitaratra miaraka amin'ny fomba fijery mahafinaritra ary ny hany zavatra angatahin'izy ireo aminay dia ny fanomezana azy ireo avy hatrany ny fampahalalana ilainy ... na iray minitra sy sasany, na roa, na telo… miaraka amin'ny fofonain'ny lehibenao eo an-damosin'ny tendany, tena tsy mahafinaritra.
Ary avelao ho marihina fa tsy mikasika ny resaka famerenam-bidy intsony aho, fa raha nilaza ilay lehibeny fa "ny olona rehetra izao dia manana OpenOffice" dia nikorontana izahay ary izay no izy, miresaka fotoana famaliana aho, zavatra izay tsy ho voavaha. ..
Valiny tamin'i Gab
Raha ny zavatra niainako, ity fahatarana ity rehefa manokatra sy manidy rakitra miaraka amin'ny LibreOffice dia tsikaritra manokana miaraka amin'ny fisie amin'ny endrika MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, sns.). Etsy ankilany, rehefa manokatra rakitra LibreOffice teratany izy ireo dia lasa LALANA haingana kokoa.
Ka ny tolo-kevitro dia ny fampiasana ireo rakitra LibreOffice teratany, raha azo atao.
Chos dia hoy izy:
Misaotra nizara, ny marina dia heveriko fa lohahevitra tsara hanitarana fahalalana ho an'ny olona toa ahy, mpampiasa an-trano, mampiasa GNU / Linux aho ary faly amin'ny fahafaha-manao, fitaovana ary fampiharana be dia be ananako sy ity Birao Libre ity ho ahy dia mahafinaritra satria tsy mila zavatra hafa aho dia feno!. Ohatra, tsy mila mametraka plugins hafa intsony aho hanonta ireo rakitra pdf, izay zava-dehibe amiko.
Amporisihiko izay te hiaina ity birao ity, tsy misy very amin'ny fanandramana, ny mifanohitra amin'izay no mahazo be.
Valiny ho an'i Chos
Teboka iray izay tsy hadinon'izy ireo ny nilaza ny fisehoany… ny loko MSoffice dia manana loko 3 (mainty, manga sy volafotsy). Raha ao LibreOffice dia misy ny safidy tsy manam-petra hisafidianana loko sy fiaviana ... Ary tena mahafinaritra ny maso izany ...
Fitaovana - Safidy - Personalization - Safidio lohahevitra ...
Alejandro Tor Mar dia hoy izy:
Ny iray amin'ireo lafiny tsara indrindra amin'ny Open Source dia ny fampiasana vokatra avo lenta amin'ny maha birao MAIMAIM-POANA sy ara-dalàna
Sombin-javatra na safidy hafa marobe - izay ho an'ny sasany manararaotra- miafara amin'ny fanakorontanana ny fanombohana rindrambaiko maimaimpoana, ny fahasamihafana amin'ny fisehoana, ny fikirakirana, ny fanaraha-maso, ny bokotra, ny hitsin-dàlana ary ny hafa, fa amin'ny ankapobeny dia manamboatra sy manao zavatra mitovy.
Fitsinjarana Linux an-jatony isaky ny sampana, fa tsy mamorona rafitra lehibe, manambany ilay andian-teny hoe "ny firaisankina dia tanjaka."
Raha toa ka nampifangaro ny hevitra sy ny ezaka izy ireo, farafaharatsiny mba mifanentana dia lehibe ny fandrosoana. LibreOffice, OpenOffice, KOffice, GnomeOffice, ankoatry ny hafa, samy mifaninana amin'ny "manao zavatra" tsirairay amin'ny fombany avy, ary koa amin'ny fampiharana tsy tambo isaina. Ny sasany manana fanohanana $ tsara kokoa noho ny hafa, izay tsy tena manampy.
Amin'ny maha endri-javatra hanampiana ny fifindra-monina, raha ao amin'ny linux dia mila mametraka ny fonosana PPTVview (mila divay ianao) vao afaka mahita ny ppt sy ny pps am-pahamendrehana, satria ny LO sy ny OO dia namorona mpijery maivana. Ny fiezahana hahita pp * marobe dia tena miadana isaky ny mamoaka ny Libre / Open Impress mavesatra rehetra fa tsy mpijery kely sy maivana, izay ao amin'ny MSO dia misy ary haingana kokoa ny mitondra azy. Ao amin'ny windows fotsiny no ampiasako LO, fa apetrako ilay mpijery herinaratra, noho io antony io ihany
Manana rakotra bug sy error izay asehon'i LO aho, miandry ny handefasana ireo mpamorona
Daniel A. Rodriguez dia hoy izy:
Manomboka amin'ny LibreOffice 4.4, fampidirana roa hafa an'ny endritsoratra Calibri sy Cambria an'i Microsoft no ampidirina. Mametraka azy ireo fotsiny:
apt-mahazo mametraka fonts-crosextra-carlito fonts-crosextra-caladea
Raha mila fanampiana ianao amin'ny fiteny eropeana tandrefana, tiorka, marika matematika ary fanohanana ampahany amin'ny fiteny eropeana atsinanana, azonao atao ny mametraka ity fonosana ity:
apt-mahazo mametraka ttf-bitstream-vera
Valiny tamin'i Daniel A. Rodriguez
ilay_rookie dia hoy izy:
Mikasika ny resaka fiaraha-miasa dia misy fitaovana antsoina hoe Sironta, izay araka ny efa novakiako dia loharano misokatra, na dia heveriko ho manana kinova maimaimpoana sy karama aza izy io, saingy manome fidirana tsara amin'ireo suite Open Source, toy ny OpenOffice sy LibreOffice. Avelako ny rohy raha misy olona liana, natao ho an'ny sehatra rehetra izany (Windows, Mac OS X ary Linux.) Ireto ny url:
Izaho manokana dia tsy nanandrana izany, fa hey, misy olona manam-potoana afaka manao izany ary avelao ho hita taratra ny zavatra niainany ary jereo raha manome valiny tsara izany.
Antperlop dia hoy izy:
Manana rindranasa ao amin'ny Access 2003 aho ary tiako ny manokatra azy ireo amin'ny WPS Office. Ahoana no hanaovana azy? Tsy haiko
Valiny amin'ny Antperlop
maryury dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, ahoana no hanovako ny fika pika ho mpanoratra amin'ny linoux?
Mamaly an'i maryury